Sony Xperia XZ yakareba-ongororo: 2017 kuongororazve kweiyo Sony's flagship foni
Mwedzi mitanhatu mushure mekunge Sony yatanga iyo Xperia XZ, tinozviongorora iyi mureza smartphone kuti tione kana ichisimudzira inokwikwidza Android mobiles. Mumazuva eSamsung Galaxy S8 uye iyo LG G6, ko ruoko rwaSony ruchiri rwakakodzera kutenga here? Heino yedu yenguva refu Xperia XZ ongororo.
Parizvino, 2017 rave riri rakasimba kwazvo gore remafoni eprimiyamu eApple. Galaxy yeS8 yeSamsung uye LG G6 ipa zvimwe zvinhu zvevashandisi vanoda, nepo iyo Kudza 8 Pro inonunura pane ese kuverenga nemutengo wakaderera wekukumbira.
Zvinoreva kuti gore rapfuura flagship mobiles, senge Sony yaXperia XZ, vanga vakanaka uye vakasundirwa chaiko kunze kwechiedza. Kunyangwe Sony ikozvino yakanyatso tarisa pane iri kuuya Xperia XZ Premium, iyo ine 4K HDR skrini uye yekambani inoshamisa zvinoshamisa Motion Ziso kamera tech.
Ndanga ndichishandisa iyo Xperia XZ kuvhura uye kudzima kwemwedzi mitanhatu yapfuura, kubvira parunhare rwakatangwa muUK. Haisi ruoko rwakakwana rwechokwadi asi pane zvakawanda zvekunakidzwa, kunyanya kana uchidya midhiya pakufamba. Nekudaro, chishandiso chaSony chinokatyamadza chinogona kuchicheka ichienzaniswa nemamwe mafoni akazara-emitengo?
Nezve chinangwa cheiyi yakareba-ongororo, ini ndakadzokera kuXperia XZ yakazara-nguva kwevhiki uye ndokuisa pasi pfungwa dzangu. Heino yangu 2017 yekuongororazve.
Verenga zvinotevera: Iwo akanakisa mafoni eSony aunogona kutenga muna 2017
Sony Xperia XZ 2017 ongororo: Kukanda-tastic
Ini ndagara ndiri fan of Sony dhizaini basa uye ichangoburwa Xperia nharembozha zvechokwadi chengetedza kuenderana kutaridzika uye kunzwa. Kunyangwe iyo isingadhuri Xperia XA inokanda yakanaka-kumucheto-kumucheto skrini inomira chaizvo.
Iyo Xperia XZ hairatidzike zvakanyanya kusiyana neiyo yapfuura Xperia Z5 mureza, nekukasira kwakatarisa zvirinani. Iwo akapamhamha epamusoro uye ezasi emakona anopa kutaridzika kwakawanda, asi iwe uri chaizvo munzvimbo yakachengeteka yeSony pano. Izvo zvakati, ini ndinoda iyo Sango Bhuruu modhi, ine yakasarudzika inokwezva mumvuri. Nyadzisa yedu yekudzokorora modhi ndiyo nhema.
Ini ndaive nekakutya pandakatanga kubata iyo Xperia XZ, seyakatangira yaive smartphone isina kusimba. Sezvauchaona kubva kwedu kwenguva refu Xperia Z5 ongororo, ruoko rwakabvaruka zvese zviri nyore. Nekutenda, ini handina kumbove nematambudziko akadaro kubva kune yazvino mureza foni. Iyo Xperia XZ yakave ichiita yakajairwa kuyedzwa kushushikana, kusanganisira kubhedheswa kutenderera muhombodo, uye kusvika parizvino haisati yatsemuka kana kupetwa pasi pekumanikidzwa.
Nekudaro, iyo alkaleido simbi inowonekera pane iri panjodzi yekukwaya. Mushure memavhiki mashoma ekushandisa, musana wainge watoputirwa nemwenje scuffs uye isina kudzika magouges. Nekukurumidza kumberi kwemwedzi mitanhatu uye nharembozha iyi inoita kunge yarwiswa ninja bofu. Nepo nharembozha dzakadai seGGG6 neHTC 10 vachifara kudzivisa kukuvara, kwekunonoka kupedzisa kunyangwe mushure mekushandisa kwenguva refu, iyo XZ ndeyechokwadi iwe yauchazoda kuputira mujekete rinodzivirira.
Sony's flagship zvakare inonzwa kunge chunky ichienzaniswa neGPS S8 uye LG G6. Izvi zviri kunyangwe iyo Xperia XZ ichitamba skrini diki kwazvo, pa5.2-inches kana ichienzaniswa nepedyo ne6-inches. Chikonzero cheizvi? Iwo mafuta epamusoro uye ezasi bezels, pamusoro uye pazasi pekuratidzwa.
Iwe uchiri kugona kungoshandisa Xperia imwe-ruoko ruoko nekutenda, kunyange pasina zvimiro chaizvo zvekubatsira mune izvi. Mazhinji mafoni, seHuawei P10 uye Samsung's Galaxy S8, inopa nzira yekudzikisa matafura kana zvichidikanwa. Kwete iyo XZ, zvakadaro.
Zvakadaro, Sony yakaita nekutenda kudzosa kuzara kwemvura kuzere kweiyi flagship kuburitswa, chimwe chinhu chinoshayikwa kubva pane zvinodhura Xperia X. Ichi chinhu chinojairika kune ekutanga handsets izvozvi, zvakanaka kuona paXZ.
Sony Xperia XZ 2017 ongororo: Midhiya uye mutambo wemitambo
Iyo Xperia XZ ichangobva kuwana yakagadziridzwa ku Android Nougat, iyo yakaita kuti runhare rwaSony runyanye kunakidza. Semuenzaniso, foni ikozvino inogona kupatsanura-skrini yakawanda-basa nemaapp mairi kamwechete; chimwe chinhu chinoshayikwa kubva kune nharembozha dzaSony kubva iyo Diki maApplication ficha yakadzikwa.
Ehezve, iyo XZ yaive yatotemerwa izere nezvakakura maficha, kunyanya kune chero munhu anoshandisa nharembozha yake kushandisa mafirimu, zvinoratidzira uye mimhanzi pakufamba. Rutsigiro rweTi-Res odhiyo matekodhi anokosheswa, kana iwe uchida kunakidzwa netwimbo dzako nenzira yavanofanirwa kunzwikwa nayo. Runhare runoita basa rinoremekedzwa rekusimudzira rekare, rakaderera-mhando matraki kuti ivo vanzwike crisper.
Kuti unyatso tarisa zvimwe zveakanakisa zveXperia XZ, tarisa yedu mazano uye mazano mazano.
Ini ndichiri fan hombe yeiyo 5.2-inch IPS skrini futi. Chokwadi, iyo Xperia XZ haizvirumbidze iyo Quad HD pani senge mamwe madhizaini ekumusoro, kusanganisira iyo Galaxy S8 uye LG G6, kana kubwinya kwe4K kubuda kweiyo XZ Premium nyowani. Nekuda kweizvozvo, namatira iyo XZ padhuze neiyo imwe ruoko rwekutanga uye mifananidzo haizove seyakajeka uye yakajeka.
Nekutenda kuti Full HD yekuratidzira ichiri kunyatso kushandisa yako epamusoro-def mafirimu, ichipa yakatsetseka vhidhiyo kutamba. Iyo G6 uye S8 inogona kupa HDR rubatsiro, asi iyo skrini yeXperia inonakidzwa nematanho akasimba ekusiyanisa uye akapfuma ruvara kubereka neiyo Sony's Super Vivid Mode yakavhurwa. Izvo zvakati, iyo yazvino LG uye Samsung mireza yakanangidzirwa kumafirimu ari kuenda, nekuda kweiyo yakatambanuka chimiro. Izvi zvinoreva kuti iwe unowana yakafara tsamba yebhokisi mhedzisiro pane Xperia XZ.
Mupfuti iripazasi, iwe uchaona iyo Xperia XZ ichienzaniswa padivi-ne-parutivi neGirazi S8's Super AMOLED skrini.
Kana iwe uine yako Sony's Playstation 4, iwe unogona zvakare kumhanyisa mutambo wako wakananga kune yako Xperia XZ nekuda kweiyo Game Stream ficha. Inobatsira kana iwe uchida kupedzisa iwo unonyengera Unchched nhanho iwe uchisvina kunze kunonetsa bum nugget.
Sony Xperia XZ 2017 ongororo: Ndine simba?
Iine Snapdragon 820 processor yakatsigirwa ne3GB ye RAM, iyo Xperia XZ yaive imwe yemafoni akasimba enguva yayo payakatanga kurova UK. Ehezve, kubvira ipapo takaona kuvhurwa kwemaviri akateedzana premium Snapdragon chipsets, iyo 821 uye iyo 835, nepo mamwe mawetsetsu azvino ano arongedza zvakapetwa ndangariro. Ipapo iwe une akawanda ekuvandudzwa akaunganidzwa pane iyo XZ, pamwe nekukwegura kwese kufunga.
Saka, Sony Xperia XZ inomira sei maererano nekuita muna 2017?
Nhau dzakanaka ndedzekuti, nharembozha iyi ichine simba rinosimbisa mwedzi mitanhatu mushure mekuburitswa. Android Nougat inomhanya zvakatsetseka sezvaungatarisira, isina kumbomira zvishoma paunenge uchisvetuka pakati pezvishandiso nezvimwe zvakadaro. Ndanga ndichitamba mamwe emazita azvino ano kurova Google Play, kusanganisira izvo zvinopinda muropa Hondo yeCrown, isina stutters kana zvimwe zvakaipa.
Mhedzisiro yangu yeAnTuTu yadonha zvishoma kubva kune yekutanga 140k zvibodzwa kusvika pa 135k avhareji mhedzisiro, asi iri donhwe diki zvekuti rinogona kungove pasi pekusachinja-shanduka.
Imwe nharaunda iyo yakanyatso kuvandudzwa nenguva iiyo Xperia XZ hupenyu hwebhatiri. Pakutanga isu takangoda kubata izere zuva rekushandisa mushe pamubhadharo, zvichireva kuti taifanira kuvhara usiku kana njodzi kumuka tisina simba. Nekudaro, mushure meyekuvandudzwa kweNougat uye kushandiswa kwakawanda, iyo Sony's flagship inogona kunyatsogara zuva nehafu pakati pemhosva. Izvo zvine mameseji mazhinji, kutamba mimhanzi, kushandisa kamera uye zvishoma zvemitambo.
Izvi zvinogona kunge zviri pasi peiyo Android inoshanda zvakanyanya kumhanya kumashure kwezviitiko, kana pamwe kumisikidza iyo Sony pachayo yaita. Chero nzira, ini ndinofara bunny.
Ehe, iyo Xperia XZ's smart bhatiri tech inobatsirawo kudzivirira kukuvara kwenguva refu kunokonzerwa nekupisa uye kuwandisa, saka tiri kutarisira kuti awa maawa makumi matatu neshanu ekushandisa nguva dzose acharamba aripo.
Sony Xperia XZ 2017 ongororo: Ndirove
Sony kashoma kuodza moyo neayo kamera tech uye iyo X XZ inoratidzira imwe yevakangwara nhare mbozha vatakatamba navo.
Iyi tri-sensor kamera inogona kutora mifananidzo inosvika makumi maviri nematatu-megapixels muhukuru, ine mitezo inotaridzika zvakanaka mune chero mamiriro. Dhata rematanho akakwana uye ruvara rwakanyatsoburitswa. Yakadzika mwenje mamiriro anobatwa mushe zvakare, pamwe neakanyanya musiyano mamiriro.
Zvisinei, the Xperia XZ Premium kamera idanho rakajeka kumusoro kwemhando yemifananidzo mumamiriro anonyengera. Sony yazvino mureza inopa yakaderera mwenje mashandiro akafanana neiyo Galaxy S8, ine chaiyo toni uye inoshamisa huwandu hweruzivo rwakatorwa. Iwe zvakare unowana zvirinani kugadzikana kwemufananidzo, kunyanya kana uchirekodha pa 4K resolution kana 60 mafuremu-pasekondi, kunyange hazvo iyo yekutanga XZ inogona kupfura kusvika ku Ultra HD vhidhiyo isina dambudziko.
Tarisa uone yedu yakadzika Xperia XZ kuongorora kamera, iyo zvakare inofanidza iyi smart snapper kune iyo Galaxy S7 uye iPhone 7's kamera tech.
Sony Xperia XZ 2017 ongororo: Mutongo
Iyo Xperia XZ inogona kutorwa nyowani nyowani kubva kutenderedza £ 400 kusvika £ 450 mazuva ano, kana iwe uchiziva kwekutarisa. Neimwe nzira, iwe unogona kuitora pachibvumirano chemutengo wakanaka - semuenzaniso, O2 iri kupa iyo XZ kubva pa £ 33 pamwedzi.
Izvo zvakachipa zvakachipa pane izvo zvinofarira zveSamsung Galaxy S8 uye iyo LG G6. Uye apo iwe usingawani iyo yakafanana super-premium yekuratidzira tech kana iyo yakawedzera mashandiro, Sony nharembozha ichiri chinhu chine-chakazara-midhiya muchina ine mashoma zvikanganiso. Kunyangwe vanodzvinyirira vashandisi vanozogutsikana, mwedzi mitanhatu mushure mekutanga.
Yakanakisa mafoni eSony Xperia izvozvi uye achiri kuuya muna2017
Sony Xperia 5 II ongororo: Sony iri nani-kukosha mureza
Sony Xperia XZ Ongororo Yekutanga: Mukudzika
Sony Xperia XZ1 vs XZ Premium vs XZ: Ndeupi Sony mureza ari nani?
Sony Xperia XZ1 Ongororo: Media maestro uye super-smart snapper yabatanidzwa
Inotevera Sony Xperia foni: Sunungura zuva, runyerekupe uye zvese zvaunoda kuti uzive